Waxyaabaha Barafka Barafka ah ee Lagu Dhiirrigelinayo Dhacdada KarFest | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliWaxyaabaha Barafka Barafka Ku Soo Bandhigay Dhacdooyinka KarFest
15 / 01 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
baraf ayaa la yaabay soo bandhigida dhacdada karfest
KarFest, oo lagu qaban doono marki ugu horeysay ee sanadkan iyadoo lala kaashanayo Dowlada Hoose ee Kocaeli iyo Dowlada Hoose ee Kartepe, ayaa ka dhici doonta Sisli Valley Sabtida, Janaayo 18keeda inta u dhexeysa 14.00-24.00. Munaasabado badan, tartamo iyo bandhigyo ayaa lagu qaban doonaa barnaamijka caanka ah ee heesaha muusigga ee caanka ah Irem Derici ayaa qaadi doona masraxa.
WAA INAAD FADLAN
KarFest, oo noqon doonta goobta lagu madadaasho nashaadaadka iyo bandhigyada Kartepe, cinwaanka dalxiiska jiilaalka, ayaa lagu qaban doonaa Sisli Valley Sabtida, Janaayo 18-keeda inta u dhexeysa 14.00-24.00. Riwaayadaha DJ ee aan la ilaawi karin, bandhigyada iftiinka leysarka, muusigga tooska ah, ciyaaraha, tartamada, farshaxanada maxalliga ah, xafladda bolse-rooti, ​​ayaa daaweysa oo kululaan doona qalbiyadiina iyo riwaayaddii muusikada İrem Derici; dabeecad gaar ah; raaxo, farxad, xornimo iyo farxad ayaa kugu sugeysa KarFest.
WAX KASTA OO LAGA HELI KARA BILAASH
Gaadiidka ilaa baarkinka, shaaha ilaa maraqa, isku shaandhaynta, tartamada, riwaayadaha iyo rootida rootiyada ayaa laga heli doonaa bilaash ilaa bilawga ilaa dhamaadka KarFest. Ka sokow, qabow kuma jiro xafladda. Booska munaasabadda waxaa lagu kululeyn doonaa inta lagu gudajiro xafladaha oo leh qoryo iyo 25 foosto. Muwaadiniinta ka soo jeeda aagga ayaa ka qaybgalay tartamo iyo dhacdooyin ay ka mid yihiin '' Boat Races '', '' Rope Pull Race '', '' Penguin Running '' iyo '' Laambada Laydhka '', '' squirrel '', '' Snowman '' 'iyo' 'Penguin' 'mascots ayaa madadaalin doona martida yari inta lagu gudajiro xafladda. Intaa waxaa sii dheer, aagga sawirrada ee kaqeybgalayaashu waalayn doonaan xusuusta ugu fiican waxay sugi doonaan martidooda goobta xaflada.
Shirka bandhigga ee KarFest waxaa lagu qabtay Maide Restaurant. Balamir Gündoğdu, Xog hayaha guud ee dowlada hoose ee magaalada, Hasan Aydınlık, kuxigeenka xogheyaha guud ee dowlada hoose ee magaalada, Mustafa Kocaman, Duqa magaalada Kartepe, Kamil Öçbe, Gudoomiyaha Dalxiiska Kartepe, Irfan Yigit, Madaxa Dalxiiska Kartepe Dabiiciga Dalxiiska, iyo wakiilka ururada
DEĞ MA AHAAN, MAGAALADA TAFISANKA KOCAELİ ”
Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli Balamir Gündoğdu ayaa sagxadda kahadlay kulanka; “Kocaeli waxaa sanado badan loo yaqaanay caasimada warshadaha. Si kastaba ha noqotee, Kocaeli; iyada oo leh dabeecad u gaar ah, badda iyo xeebaheeda xagaaga, buuraha barafka leh ee xilliga qaboobaha, ayaa had iyo jeer ahaa qayb lagama maarmaan u ah dalxiiska. Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, waxaan qaadnay tillaabooyin aad u muhiim ah oo aan ku darnay astaanta 'Xilliga Dalxiiska Magaalada Kocaeli' dhammaan magacyada magaaladeena waanan sii wadaynaa qaadashadaas. Iyada oo ururradeenna ay ku faafayaan in ka badan 365 maalmood oo sanadka ah, Kocaeli waxay qaadaysaa talaabooyin adag si ay u noqoto xarunta waxqabadka ee Bariga Marmara. ”
“KOCAELİ way istaagi doontaa”
Balamir wuxuu caddeeyey inay qabanqaabin doonaan Bandhigga Barafka markii ugu horreysay sannadkan; Arak Markii aan abaabul iskaashi tusaale ah la sameyneynay degmada Kartepe, waxaan abaabushay Kartepe Festival Festival-KarFest iyadoo lagu darey tabarucaada farshaxanada gobolka. Waxa ay noqon doontaa goobta hawlaha xiiso leh iyo shows karfest midba midka kale ka, taas oo ka mid ah cinwaanka ugu muhiimsan on January 18 Kartepe dalxiiska xilliga jiilaalka ee Turkey waa la qaban doonaa maalinta Sabtida. Bandhigga ayaa lagu qaban doonaa dooxada Sisli ee wadada Mountain Kartepe waxayna socon doontaa 14.00 saacadood iyo 24.00 saacadood. Kartepe, taas oo ah mid ka mid ah cinwaanka ugu aqoonyahanada dalka ee dalxiiska xilliga jiilaalka ee Turkey ah, taas oo iidaya Uludag, tallaabo in istaagi lahaa oo ka soo baxay Kartalkaya sida, "ayuu yiri.
“FARSAMADU WAA INUU KA DAMBEEYA Ç
Mustafa Kocaman, Duqa magaalada Kartepe oo sheegay inay waajib tahay in xafladda la ilaaliyo; Dalxiiska xilliga qaboobaha ee Kış jiilaalka waxaa lagu sameeyay gobolkayaga wakhti dheer. Ganacsatada iyo dadka deegaanka ayaa doonayey in ay iidaan oo kale sameeyaan. Waxaan bilownay dadaalkeenna ah sidii aan dadkayaga uga farxin lahayn oo aan ugu kordhin lahayn qiimaha astaanta gobolkayaga. Waxaan qaadaynaa talaabo aan la galeyno KarFest si aan u sameyno dabaaldega ugu quruxda badan gobolka Marmara. Dawlada Hoose ee Magaalada ayaa noo furi wadday. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynahayaga. Mashruucan waa in la taageero. Waxaan yeelan doonnaa cilado badan, laakiin kuwan waa in loo dulqaataa. Waxaan si gaar ah u dooneynaa dadkayaga iyo xubnaha saxaafadda inay daryeelaan xafladda kul.
KHUDBAD BADBAADO OO LAGU SAMEEYO MADAXWEYNAHA
Dhamaadka barnaamijka, borotokoolka wuxuu ku soo bandhigay KarFest bartamaha magaalada. Dareenka dadweynaha ee lagu qabtay Masjidka cusub ee Jimcaha 'Kartepe'den barafka' ayaa lagu daadiyay barxadda laba jibaaran magaalada. Ka sokow barafka dabiiciga ah, 2 gawaarida wadada ka baxsan, baaskiillada barafka ah iyo guluubyada barafka waaweyn ayaa la dhigay isla aagga.
Munaasabadda, oo u furan dadweynaha, waxaa ka mid noqon doona bandhigyada DJ, bandhigyo iftiin leys ah, muusig nool, ciyaaro, tartamo, farshaxanno maxalli ah, xaflad saloon-rooti ah, cabitaanno si aad u diiriso iyo riwaayadaha İrem Derici, magaca caanka ah muusikada pop. Markii la bilaabay munaasabadda KarFest, dhacdo layaab leh ayaa lagu qabtay Izmit Town Square.
Dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaa qaaday Waaxda Gaadiidka Magaalada, Dawladda Hoose ee Kartepe, Waaxda Boliiska Degmadda iyo Taliska Gendarmerie Degmadda qaanuunka taraafikada iyo barta gaadiidka. Si looga fogaado carqaladaha taraafikada, kooxaha Magaalada Caasimadda iyo Kartepe; Xiriirimaha Maşukiye-Derbent iyo Suadiye-Arslanbey'den ayaa wadooyinka oo dhami furnaan doonaan. Maşukiye wuxuu xirnaan doonaa taraafikada illaa 15.00. Adeegyada basaska ee kuyaala fagaaraha Maşukiye waxaa lagu gaarsiin doonaa goobta xaflada 11.00 saac gawaari qaas ah ama gaadiidka dadweynaha.
Munaasabadda Dhiirigelinta Wadada Eurasia ee Edirne
Dadka Olympos Teleferik ee ku soo booqda barafka ayaa la yaabay
Suxufiyiinta Sucuudiga Waxaanu wadaagnaa saxafiyiinta rasmiga ah ee xafladda 2013
18 Ku Guuleystey Dhacdadii Raacday ee Rakaabka Tartanka Macaamiisha oo Lagu Qabtay
Gaadiidka baska oo la yaabay rakaabkii YHT